Fincilli Diddaa Garbummaa Itti Fufa Qabsoo Bilisummaa Oromoo ti!
Date: November 6, 2011Author: Oromedia 0 Comments
(Oromedia, 7 Sadaasa 2011) Sadaasa 9: guyyaa yaadannoo gaddaa waan taheef dhala Oromoo kan tahe hundi bakka jirutti guyyaa kana gaddaan yaadachuun seenaa FDG akka kabaju ABO ibse.
ABO guyyaa yaadannoo FDG bara 2011 ilaalchisee ibsa baaseen akka hubachiisetti, guyyaan kun itti fufa qabsoo diddaa garbummaa Oromoo abbootii keenyaan qabsiifame ta’uu yaadachiisee, addatti immoo FDG kan sadaasa 9, bara 2005 bifa sirnaa fi tartiiba qabuun qinfamee labsame irratti wareega kaffalame kan itti yaadatamuu dha, jedhee jira.
”Ulee hammeenyaa mootummaan Wayyaanee ummata Oromoo irratti ol fudhate karaan itti jalaa bahuu dandeenyu didnee fincillee mirga keenya deebifachuu duwwaadha,” kan jedhe ibsi ABO kun, jagnooti keenya baroota dabran osoo mirga ummata Oromoof jedhanii falmaa irra jiranii harka diinaatti kufan yaadachuu qabna,” jedhee jira.
ABO itti dabaluunis, ummati Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuuf ABO jalatti qindaawee qabsoo hidhannoo fi siyaasaa geggeessaa jiruun wareegama ulfaataa kaffalaa akka jiru yaadachiisee, wareegamni isaanii bilisummaatti nu geessuu kan danda’u yoo gumaa isaanii baafnee dha jedhee jira.
Guyyaa yaadannoo kanas diddaa daran jabeessuun, jagnooti keenya FDG irratti kufan daqiiqaa tokkoof yaadachuun, Sirna yaadannoo irratti faaruu gootowwaani “ Maal dhaamanii” jedhu faarfachuun, Sabboontota sababa FDGtii fi QBOtiif jecha hidhaa jiran gaafachuu fi Gumaata addaa walitti qabuun hidhamtootaaf kennuun ayyaanicha yaadachuun akka danda’amu ABOn dhaamee jira.
Dhaadannoolee guyyaa kana dhaadatamuu malan keessaas ” Mirga keenya falmachuuf eenyuun illee eehama hin gaafannu!, Mirgi hiree murteeffannaa ummata Oromoo haa kabajamu!, Hidhamtooti siyaasaa Oromoo haa hiikaman!, Barattooti Oromoo hidhaman haa hiikaman! Fi kkf ” kan jedhu hundee yoo ta’u, Qeerroon Oromiyaa bakka jiran maratti qabsoo diddaa garbummaa waan jabeessu mara akkaataa isaaniif aanja’een akka finiinsan dhaamsi darbee jira.
Previous Previous post: Guyyaan Yaadannoo Fincila Diddaa Gabrummaa Dhiyaate.
Next Next post: ከ50 በላይ የኦሮሚያ ባለሥልጣናት ጥፋተኛ ተባሉ